Daacish oo sheegatay iney dowlad u tahay dhamaan Muslimiinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kooxda la magacbaxday “Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam” ee afka Cabariga lagu soo gaabiyo “Daacish”, afka Ingiriiskana lagu soo gaabiyo “ISIS” ayaa ku dhawaaqday iney dowlad Islaami ah ka dhiseen qeybaha ay ka maamulaan dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Daacish ayaa sheegtay in dib loo soo celiyey Khalaafadii Islaamka ee horay u burburtay, islamarkaana Amiirka Khalaafada Islaamku uu yahay hogaamiyahooda lagu magacaabo Abuubakar Al-baqdaadi.
Cod uu soo diray afhayeenka Daacish oo lagu magacaabo Abuu Maxamed Al-cadnaani ayaa lagu sheegay in magacii Daacish ee ahaa “Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam” lagu baldelay magaca ah “Dowladda Islaamiga ah”.
Xarakadahan hubeysan ee Sunniga ah, islamarkaanaka heysata dagaalyahano kazoo kala jeeda dalal farabadan ayaa haatan maamusha gobollo ka mid ah galbeedka Ciraaq iyo Bariga Suuriya.
Daacish ayaa sidoo kale ku dhawaaqday iney baabi’iyeen xuduudkii u dhaxeeyey dalalka Carabta ee ku qornaa heshiiskii Sykes–Picot ee November 1915-kii iyo March 1916-kii Faransiiska iyo Ingiriisku ku kala qeybsadeen qeybo ka mid ah dhulka Suuriya, Lubnaan, Ciraaq iyo dhulal kale oo Carbeed.
Al-cadnaani ayaaa sheegay in golaha Shuurada Daacish ay ka doodeen arrinta dowladda Islaamiga ah, islamarkaana gaareen go’aanka ah in la dhiso Khalaafa Islaami ah oo leh amiir guud oo ah Abuu Bakar Al-baqdaadi.
(Abuu Bakar Al-baqdaadi)
Afhayeenka Daacish ayaa xusay in Abuu Bakar Al-baqdaadi aqbalay baycada, islamrkaana uu yahay Khaliifka Muslimiinta oo dhan.
Ugu dambeyn, Al-cadnaani ayaa xusay in Khalaafada Islaamiga ah aheyd riyo ku jirtay dhamaan quluubta Muslimiinta, wuxuuna dhamaan dadka Muslimka ugu baaqay iney beyco la galaan Abuu Bakar Al-baqdaadi.
Daacish ayaa ku dhawaaqday go’aankan xilli ay wajahayaan dagaallo culus oo ay ku qaadeen ciidamada dowladda Ciraaq, kuwaasoo weliba todobaadkaan dalka Ruushka ka helay 10 diyaaradood oo nuuca dagaalka ah.
Qarax ka dhacay Suuqa Kaaraan oo sababay dhimasho iyo dhaawac